Shacabka Galmudug oo su’aalo kulul ku weeraray madaxweyne Xaaf (Dood xasaasi ah) – War La Helaa Talo La Helaa
Shacabka Galmudug oo su’aalo kulul ku weeraray madaxweyne Xaaf (Dood xasaasi ah)
By Jabra Shaaciye	 On Jan 6, 2020
Madaxweynaha maamulka waqtigiisa dhammaaday ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo dhowaan shaaciyay inuu ka laabtay wakaaladii uu siiyay Dowladda dhexe ee federaalka ee dhismaha maamul cusub oo Galmudug ayaa wajahay inay su’aalo ku weeraraan dadka ka soo jeeda degaanada maamulkaasi ka arrimiyo.
Dooda oo laga sii daayay idaacadda VOA-da laanteeda afka Soomaaliga ayaa dhageystayaasha ka soo jeeda Galmudug ee fursadaha u helay oo ku kala sugnaa dalka gudihiisa iyo dibadiisa inay su’aalo weydiiyaan Madaxweyne Xaaf ayaa waxaa ka mid ahaa: “Madaxweyne maadaama aad baal dahab ah uga jirto taariikhda maamulka Galmudug isla markaana Ahlu Sunna la heshiisay mala oran karaa isbedelka kugu yimid wuxuu carqalad gelinayaa dadaalada ka socda Dhuusamareeb?”.
Madaxweyne Xaaf oo su’aashaasi ka jawaabayay ayaa sheegay inuu isagu doonayo Galmudug oo yeelata maamul cusub, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in caqabadda hortaagan tahay faragelinta dowladda oo wadda xubno degaanka ka soo jeeda kuwaasi oo uu ku eedeeyay inaysan wax dan ah ka lahayn dadka Galmudug balse doonaya inay danahooda gaarka ah fushadaan.
Su’aalaha la weydiinayay Madaxweynaha Galmudug Xaaf waxaa kale oo ka mid ah: “Madaxweyne maadaama maamulkaasi u muuqdo mid sii burburaya isla markaana aad is khilaafsan tihiin Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxweyne Ku xigeenkaasi, sow ma moodid inaad keli ku tahay go’aankaaga?”.
Waxa uu sheegay Madaxweyne Xaaf inuu ka qeyb qaadanayo howlaha lagu dhisayo maamulka cusub ee Galmudug oo ka socda magaalada Dhuusamareeb, isagoona sheegay inuu dhowaan halkaasi tegayo, hase yeeshee waxa uu hoosta ka hariiqay inuu isagu doonayo in loo daayo arrimahaasi maamulkiisa iyo shacabka ku dhaqan goboladaasi.
Mar uu ka hadlayay sababta keentay inuu kahor jeesto dadaalada dowladda federaalka ee ka socda magaalada Dhuusamareeb, waxa uu sheegay Madaxweyne Xaaf in muddo 10-bil ah aan wax horumar ah laga sameynin degaanada Galmudug.
“Wax la qaadan karo ma aha muddo 10-bil ah laga hirgelin mashaariicda lagu horumarinayo degaanada Galmudug” ayuu yiri madaxweynaha oo sheegay inuusan weli hirgelin mashruuc lagu casriyeynaya dekedda Hobyo, wuxuuna ku eedeeyay siyaasiyiinta iyo xubnaha Galmudug ka soo jeeda ee dowladda ku jira inay arrimahaasi ku lug leeyihiin.
Su’aashii ugu adkeyd ee la weydiiyay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee maamulka Galmudug ayaa ahayd: “Madaxweyne mala oran karaa isbedelka cusub ee kugu yimid waa mid dhaqaale raadis ah?” hase yeeshee Xaaf ayaa sheegay inuusan isagu dooneynin dhaqaale, balse uu doonayo in Galmudug yeelato maamul ay sameysteen dadkiisa.
“Dadka Galmudug waxay diyaar u yihiin inay sameystaan maamul ka shaqeeya danahooda, balse marna xalaal ma aha maamul kor looga keenay oo ay dabada ka riixeyso Dowladda” ayuu yiri Madaxweyne Xaaf oo gebi ahaanba meesha ka saaray in dowladda federaalka ah ka qeyb qaadato dadaallada lagu dhisayo maamul cusub oo Galmudug yeelato.
Hadalka Madaxweyne Xaaf ee ka dhanka ah dowladda dhexe ayaa ku soo beegmaya xilli ay gabagabo mareyso dhismaha Baarlamaanka cusub ee Galmudug isla markaana la dhameystirayo Xildhibaanada ay soo gudbiyaan ergooyinka beelaha.
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre oo dhowaan socdaal ku tegay magaalada Dhuusamareeb ayaa kala diray guddigii dib u heshiisiinta u magacowday dowladda arrimaha Galmudug, isla markaana ku guuleystay khilaaf ka taagnaa 20-ka xildhibaan ee ururka Ahlu Sunna laga siiyay Golaha Baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug, isla markaana kulan la qaatay waxgaradka ka soo jeeda beelaha ee Dhuusamareeb ku sugan, kuwaasi oo aqbalay xubnaha Ahlu Sunna u matalaya Baarlamaanka cusub.
Dhinaca kale dhismaha maamul goboleedka Galmudug oo markiisii hore soo maray marxalado kala duwan xilligii dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh ku mudatay eedeymo iyo faragelin, ayaa tan iyo markaasi waxa uu dhex maquuranayay khilaafyo kala duwan, iyadoo dowladda dhexe ee federaalka Madaxweyne Farmaajo la kacaa kufeyso sidii ay Galmudug u yeelan lahayd maamul cusub, bacdamaa maamulka waqtigiisu dhammaday ee uu hoggaaminayay Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) meesha ka sii baxayo.
DHAGEYSO: Soomaaliya oo Looga Digey in ay Faraha La Gasho Khilaafka Iiraan iyo Mareykanka
SAWIRRO: Dagaal adag oo ka dhan ah Ayaxa oo ka bilowday gobolka Galgaduud